मानव सभ्यता को इतिहास भर, मान्छे राम्रो र नराम्रो को ज्ञान प्रयास गरेका छन्। पुरातन समयमा समेत मा Sages शारीरिक र intangible दुनिया यी विपरीत घटना बीच inextricable लिंक उल्लेख गरे। एक समाचार र मूर्खता टी बिना, गरिबी बिना मृत्यु बिना प्रकाश बिना अन्धकार, जीवन, कुनै रोग स्वास्थ्य, धन रूपमा, अन्य बिना हुन सक्दैन। डी
Amulets - विभिन्न जातीय समूह को जीवन को अभिन्न भाग
शोधकर्ताओं, archeologists र इतिहासकारहरूले पुरातन हस्तलिपिहरूमा र, संसारको विभिन्न भागमा दैनिक घटनाहरूको छविमा अर्को फेला दैनिक वस्तुहरु फेला पुरातन स्मारक अध्ययन गर्ने चित्रित दृष्य फिक्सिंग भने, आवर्ती संकेत देखा वा कारण कब्जा घटनाहरू थियो देखाउँछ। एक सनकी प्रतीक, अरूलाई - - विभिन्न जनावर को पुर्जा संग जीवित संस्थाहरू, तेस्रो मा - पशुहरू आफूलाई केही अवस्थामा।
अक्षरहरू को एक स्थिर, अन्य, यो आन्दोलन समावेश रूपमा देखिन्छ विपरीत। र हुनत ती सबै भन्दा detachment र तटस्थता को छाप दिनुभयो, शोधकर्ताओं सधैं र तुरुन्तै विशिष्ट आफ्नो सार र अर्थ चिनारी गर्न सक्षम छन्: तिनीहरूलाई छ के निहित - राम्रो वा नराम्रो, कारण वा परिणाम? यो यिन-यांग, Ouroboros, सानो किसिमको माछा, kolohorta, Ankh, molvintsa, केही प्रतीकात्मक जनावर, देवताहरूलाई, र यति मा फिक्री। डी
यी संकेत उद्देश्यले तिनीहरूलाई बीच समानता सिर्जना गर्ने, को antagonistic सेना संतुलन छन् बाहिर जान्छ।
दुष्ट को एक अतिरिक्त, अप अवसर दयाको प्रेरित लागि खोल्छ - यो धेरै दया दुष्ट स्वीकार्नुहुन्छ र, अर्कोतर्फ, कि ज्ञात छ। एक र अन्य शक्ति दुवै को preponderance गम्भीर समस्याहरूको संग fraught छ। संसारमा सबै परस्पर छ, र मानिस सानो र defenseless छ किनभने - उहाँले गैर-मौखिक जादू amulets को सहायता गर्न आउँछ।
शान्ति प्रतीक र भलाइ, विरोध तत्व को आपसी प्रभाव leveling खराब neutralizing र पछि पुरातन समयका यो चलनअनुसारको थियो पर्खालहरु र utilitarian वस्तुहरु मा रंग गर्न, राम्रो आकर्षित। आकर्षण, amulets, इच्छित आशय, शरीरमा थकित, आफूलाई misfortune देखि रक्षा गर्न वा कदर लक्ष्य को कार्यान्वयन हासिल गर्न यसरी आशा embodies।
दया र कृपा यस प्रतीक यहूदीहरूले र मुस्लिम एक संरक्षकको मानिन्छ, तर यो monotheistic धर्म को उद्भव अघि लामो देखियो। एक स्रोत, symmetrical पाम hamsa अनुसार -, पुरातन मेसोपोटामिया को मूर्तिपूजक गुटहरू सम्बन्धित अन्य मा - मिश्र।
पुरातन मिश्री विश्वास अनुसार, औंलाहरु सानो किसिमको माछा - Osiris र Isis को एक ईश्वरीय कन्सर्ट। केन्द्रीय औंला - आफ्नो छोरा बाजको टाउको र दुई बाहिरी पैतृक आत्माहरू प्रतिनिधित्व गर्छ।
खुला हात को लागि - Hamsa खराब आँखा विरुद्ध procreation, स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रतिनिधित्व गर्छ। यो कार मा हङ एक सार्वभौमिक amulet छ, घरमा, कंगन र चेन संलग्न।
आभूषण - symmetrical पाम को रूप मा पेंडेंट र कान को बाली, सुन र चाँदीको गरे, बहुमूल्य पत्थर, तामचीनी र उत्कीर्णन संग सजाया।
इस्लाम मा, Fatima वा hamsa को हात, धर्म को पाँच स्तम्भहरु प्रतिनिधित्व - रमजान, गरिब, jihad, तिर्थयात्रा Mecca गर्न र अनुष्ठान स्नान गर्न उदारता समयमा व्रत।
Fatima पाम अल्जेरिया राष्ट्रिय प्रतीक र गणतन्त्र राष्ट्रिय झण्डा मा चित्रण गरिएको छ।
मुस्लिम जन्तरको को इतिहास छ:
Fatima अगमवक्ता मुहम्मद छोरी थियो। पौराणिक कथा अनुसार, त्यो बिरामी निको पार्न आफ्नो हात स्पर्श गर्न सकेन। एक पटक, त्यो खाने खाना पकाउने थियो, आफ्नो Mistress संग उनको पति घरमा प्रवेश, Fatima आश्चर्य को चम्चा ड्रप र तातो पकवान खुला हात हलचल गर्न छोडेनन्। शोक, डाह र निराश यसको संवेदनशीलता deprived। मुसलमान महिला गर्दा तिनीहरूले दुष्ट विभिन्न manifestations देखि भावनात्मक समर्थन र सुरक्षा आवश्यक Fatima पाम गर्न खोल्दै भएकोले।
मरियम को हात
यहूदी परम्परा अनुसार Hamsa प्रतीक मोशाको Pentateuch (टोरा, Tanakh) - व्यक्ति दृष्टि, सुनेर स्पर्श, गन्ध र स्वाद निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ - अर्थ जो उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था, साथै पाँच हिब्रू अक्षरहरू र पाँच सचेत, परमेश्वरलाई चिन्न।
मरियम वा Hamesh विष एक हात - हात बहिनी ईश्वरीय दूत छ - हारून र मोशा। एक छेउमा सृष्टिकर्ता को यहूदी सानो किसिमको माछा-देखेर आँखा पनि चित्रण गरिएको छ, र अन्य मा - दाऊदको तारा वा Amida को शब्द।
राम्रो र नराम्रो बीच सन्तुलन को चिनियाँ प्रतीक
चिनियाँ अक्षर राम्रो र खराब, यिन-यांग, यो कालो र सेतो सर्कल, वेभी दुई बराबर भागमा विभाजित लाइन हो। कालो र सेतो यसलाई एकै समयमा, प्रत्येक अन्य मा भन्दा पोखिन्छ रूपमा र, यो प्रत्येक अन्य मा स्रोत। प्रत्येक भाग भित्र त्यहाँ विपरीत रंग को एउटा सानो सर्कल छ।
Opposites को स्थिर interpenetration र rebirth - चीन वसोवास अनुसार, यो आंकडा ब्रह्माण्डको, को ताओ को प्रकृति को गुप्तिकरण सार हो। विश्व सुरिलो छ, र मान्छे भनेर बुझ्नुपर्छ।
को यिन-यांग प्रतीक को चिन्तन दुनिया अर्डर न्याय एक अर्थमा, रात दिन निम्नानुसार दुर्भाग्यपूर्ण घटना मा सधैं आनन्दित हुनुपर्छ भन्ने विश्वास दिन्छ - यो अपरिहार्य छ। यसलाई सही ढंगले वास्तविकताहरु बदलिएको व्यवहार गर्न र अनन्त आनन्द र आनन्द को संभावना भर मात्र महत्त्वपूर्ण छ।
यिन-यांग - संसारमा अनुरूप मात्र छैन विश्वव्यापी मानव प्रतीक। कहिलेकाहीं प्रेमीहरूको केटाहरू र बालिका प्रेम र भक्ति को अभिव्यक्ति लागि यो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले यिन-यांग को एक amulet किन्न आधा साझेदारी र प्रत्येक अन्य दिन। यिन - कालो र प्रतीक महिला र यांग - सेतो र मानिस प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो हाल आधा सेतो लिन्छ, र जवान - कालो। यसरी तिनीहरूले प्रत्येक अन्य वफादार हुन एउटा दायित्व आयातित।
चिनियाँ परम्परा मा चरा
को यिन-यांग सबै आसपास ठाउँ मेल खान्छ र चिनियाँ प्रयोग विशेष वर्ण को कुनै पनि विशिष्ट क्षेत्र मा इच्छित लक्ष्य हासिल गर्न, विरोध तत्व संतुलन इरादा छ भने संकुचित कार्य केन्द्रित। जनावर र चरा को बानी को उमेर पुरानो अवलोकन आफ्नो सुविधाहरूको बारेमा बासिन्दा आकाशीय ज्ञान दिनुभयो र यी पशुहरू प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतीक देखि लाभ कस्तो उत्पन्न गर्न सकिन्छ। भलाइ, प्रेम, भौतिक धन को एक प्रतीक र एक सफल क्यारियर - चीन, चरा वसोवास अनुसार।
लगभग हरेक चिनियाँ घर, चीनी माटो मूर्तिहरु को यसको दक्षिण-पश्चिमी भाग मा मन्डारिन बतख प्रेमीहरूलाई एक जोडी देख्न सकिन्छ। तिनीहरूले जीवनको लागि एक जोडी सिर्जना किनभने चिनियाँ दर्शन, तिनीहरूलाई यस्तो वफादारी, प्रेम र स्नेह रूपमा गुणहरू ascribes।
तालिका दक्षिण पर्खाल को मध्य मा राखिएको छ मा, roosters तथ्याङ्कले राख्नुभयो। यी बोल्ड चरा सधैं अपराधीहरूले आफ्नो harems रक्षा र सबै कुखुरा सन्तुष्ट, खुवाउनुभयो थिए र तिनीहरू कुनै पनि हराएको छ भनेर र प्याक तर्किसकेका छैन भन्ने तथ्यलाई लागि आँखा बाहिर राख्न छन्। क्यारियर प्रगतिका विषयमा सबै भन्दा राम्रो सहायक - यो कुखुरा कि विश्वास छ।
अपार्टमेंट को दक्षिण-पूर्वी कुनामा - घरमा सामाग्री धन आकर्षित एक क्षेत्र। यहाँ तपाईं आगोको फिनिक्स एक आंकडा वा छवि पाउन सक्नुहुन्छ।
Owls (अपरिचित को खराब प्रभावबाट जोगाउन), sparrows र परेवा (spouses बीच शान्ति र एकता लागि), हेरोन्स (दीर्घायु लागि), चीलले (willpower र लागि - चिनियाँ घर सधैं भाग्य ल्याउन अन्य चरा लागि एक कुना छ सङ्कल्प), (capercaillie respectability र आत्म-विश्वास), swans (विचार को शुद्धता) र (Falcons प्रतियोगिता मा साहस र विजयको) को लागि लागि।
चरा, प्राचीन मिश्रको राम्रो को सेना र दुष्ट personifying
प्राचीन मिश्र मा, mythical चरा महान् Gogotun र भियना देवताहरूको छलफल थिए, र फाल्कन हत्या, गिद्घ वा Ibis मृत्यु द्वारा सजाय थियो।
चन्द्र-देवता, बुद्धि र न्याय, उहाँले एक Ibis को टाउको थियो। यो चरा मिश्रीहरूले भविष्यमा presaged। यो नील को वितरण नियन्त्रण गर्ने विश्वास थियो, र यो प्रत्यक्ष पृथ्वीको फल बाली कसरी सम्बन्धित छ।
तीन मुख्य मिश्रको देवताहरूको बाजको टाउको, को ankh स्वामित्व जो को एक, भाग्य को सबै सडक खोल्दछ प्रमुख, एक बाज को टाउको थियो। यो चरा फिरऊनको संरक्षक छ र तिनीहरूलाई सुरक्षित।
Nehbet देवी पखेटा र शिखा काइट थियो। त्यो फिरऊनले शक्ति छ र बहुमूल्य धातु खानी सुरक्षित गर्नुपर्छ। सहायता र साधारण मान्छे को लागि आग्रह Nehbet द्वारा। उनको विशाल पखेटा कुनै पनि खतराबाट sheltered, र दुष्ट को सेना dispersed।
मिश्रीहरूका पंथ मा बिरालो
मिश्रीहरूले चरा, तर पनि जनावर मात्र होइन उपासना गर्थे। मिश्री पंथ मा बिरालो भलाइ, आनन्द र प्रजनन सङ्केत। यो जनावर - मान्छे गर्न देवताहरूको देखि एक उपहार। यसको embodiment - एक सुन्दर देवी Bastet बिरालो टाउको संग। उनको सम्मान मन्दिर निर्माण मा थिए, र Bastet समर्पित Bubastis शहर, राजा हेरोदले देखि आफ्नो भाग्ने क्रममा उनको ईश्वरीय पुत्र, संग भर्जिन मरियमलाई आए जो पहिलो मिश्रको शहर थियो।
यदि Bastet उचित श्रद्धाको प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि एक सिंहनी को टाउको संग दुष्ट Sekhmet यसलाई परिवर्तन भएको थियो।
प्राचीन मिश्रमा बिरालोहरु मिश्रीहरूले धेरै देशहरूमा आपूर्ति जो गहुँ बाली, को सुरक्षा रूपमा सेवा गरे। यी पशुहरू मुसा बिगार्छ र अन्न barns को स्टक नष्ट गर्न अनुमति थिएन। मृत्यु ढुंगाले हानेर एक बिरालो हत्या मानिस। आगो वा बाढी बिरालोहरु को घटना मा पहिलो सुरक्षा गर्न घर बाहिर लगे।
प्राचीन मिश्रमा बिरालोहरु सामान्य चिहानमा आफ्नो मालिक संग गाडे थिए। आफ्नो mummified वा विशेष crematoria मा जलाए। बिरालो मृत्यु भने, यसको मालिक केही दिन पालन शोक - मानिसहरू आफ्नो eyebrows बन्द shaved र महिला उपयुक्त पोशाक मा तैयार थिए। Bastet मूर्तिहरू राम्रो र भौतिक समुन्नतिको प्रतीक रूपमा, अझै पनि आधुनिक मिश्रीहरूका घर सजाउनु।
हालैका दशकहरूमा, पुरातन पवित्र प्रतीक (जस्तै भलाइ, ankh को मिश्री प्रतीकको रूपमा) सक्रिय आफ्नो subculture को exclusivity व्यक्त गर्न जवान मानिसहरूले प्रयोग भएको छ। त्यसैले goths, भावनाहरु, punks, hippies र थप खुसीसाथ फिरऊनको tombs फेला, वा स्लाव भाषाहरु Vedas मा peeped प्रतिलिपि को कलाई र necks amulets मा पहना।
जीवनको मिश्रको प्रमुख, को ankh राम्रो र खराब, यिन र यांग को चिनियाँ प्रतीक भन्दा कुनै कम अचाक्ली अर्थ छ।
पुरातन मिश्रीहरूले शरीर खोल मा एक मानिसको छोटो जीवन मात्र सीमित, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर विश्वास गर्थे। आधारभूत जीवन मृत्युको सीमा बाहिर, यस Duat छ। को afterlife लागि ढोका खोल्न मात्र deity को ankh पकड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुञ्जी धेरै अर्थ छ। यसलाई गोप्य ज्ञान र सुरक्षा दुष्ट शक्तिहरूको देखि एक मानिस र एक महिला, सूर्योदय र मानव शरीर भित्र जीवन ऊर्जा को आन्दोलन, साथै पहुँच प्रतिनिधित्व गर्दछ।
मिश्र, को Copts को प्रारम्भिक मसीहीहरू आफ्नो विश्वासको ankh प्रतीक घोषणा। सुरुमा प्रमुख जीवन Osiris गर्न belonged। को Crusades को शुरुवात कडा ख्रीष्टियन सम्बन्धित सम्म, दुई माछा, अल्फा र ओमेगा, लङ्गर, जहाज र अन्य - ख्रीष्टले आफ्ना धर्म पिता, र ankh, अन्य संकेत संग भयो।
Ankh - भलाइ, बुद्धि र विजय दुष्ट माथि को प्रतीक। यो पनि जीवनको रूख छ जहाँ घन्टी - Crohn गरेको र स्वर्गीय विश्व, र रड - रूख ट्रंक र मानिसको मार्ग।
कि डेलिभरी सजिलै भयो र नयाँ मानिस, संसारमा आउनुभयो राम्रो स्वास्थ्य र राम्रो भाग्य संग endowed त मध्य युग ankh मा, ओछ्यानमा गर्भवती महिला माथि हङ।
राम्रो र नराम्रो, यिन र यांग को चिनियाँ प्रतीक - अर्थ र पुरातन मध्य पूर्व Ouroboros को महत्त्व त्यस्तै अबेर रूपान्तरण।
Uroboros - सर्प को घन्टी मा coiled र यसको पुच्छर काट वा आफै spewing। प्रकृति र स्थिर परिपत्र गति ब्रह्माण्डको को सेना मा सबै cyclical - यो, मान धेरै सहित समावेश भएको पुरानो प्रतीक को छ। वरपरको वास्तविकता - यो सर्प को मुखिया र पुच्छर को भित्री संसारलाई बुझाउँछ। मानिस, साथै प्रकृति को सारा, तिनीहरू गरिरहेको र स्थिर घनिष्ठ सम्बन्ध हो छन् भनेर वर्ण को सार। सबै सबै प्रक्रियाहरू स्थिर र प्रत्येक अन्य समान हो, केही अन्त गर्न आउँछ, रहन्छ।
केही स्रोतहरु अनुसार, राम्रो र नराम्रो को प्रतीकको रूपमा Ouroboros र वास्तविक संसारको एक मोडेल रूपमा आफ्नो अनन्त चक्र, आविष्कार र को समयमा मरियम-यहूदी को प्रसिद्ध विद्वान को एक छात्र द्वारा चित्रित थियो मिश्री रानी क्लियोपेट्रा। अन्य स्रोतबाट अनुसार, यो 1600 ई.पू. देखि ज्ञात गरिएको छ। ई। र मिश्री burials पनि।
Uoroboros - सबैभन्दा ब्रह्माण्डको सही र असल र खराब, मृत्यु र rebirth को सबै भन्दा प्रसिद्ध प्रतीक, सदाको र अनन्त र स्वर्ग र नरक, पृथ्वी र पानी तारा।
रूस मा राम्रो र नराम्रो को पूर्व-मसीही प्रतीक। Kolohort
राम्रो र नराम्रो, को cyclicity को धारणा र पुरातन Slavs भौतिक संसारको impermanence हामी अन्य मानिसहरूका बारेमा थाहा के बाट पनि फरक छैन। posolon र widdershins - रूस मा राम्रो को पनि मुख्य प्रतीक, kolohort, प्रत्येक अन्य आन्दोलनहरु सन्तुलनमा symbolizing एक सर्कल, जो आठ oppositely निर्देशित बीम स्थित छन् केन्द्र छ। यो राम्रो र नराम्रो को चिनियाँ प्रतीक संग, साथै uroboros संग रूपमा resonates।
Kolohort सूर्य र प्राकृतिक घटना को अनन्त चक्र प्रतिनिधित्व गर्छ। तिनलाई गाँसिएको र Yarila जन्म भएको थियो जो परमेश्वर, विशेषताहरु पायो छ संग, फस्टाए र एउटै समयमा प्रत्येक वर्ष मृत्यु भयो। Yarila rusicham पृथ्वीको फल, परिवारमा सैन्य मामिलामा विजय, सद्भाव र प्रेम को एक धनी बाली दिनुभयो।
Yarila, राम्रो र नराम्रो को स्लाव भाषाहरु प्रतीकको रूपमा kolohorte मा embodied पनि पुर्खाहरूको, जीवन र मृत्यु को को आत्माको अधिकार थियो।
Molvinets - असल को स्लाव भाषाहरु प्रतीक, परमेश्वरले रड को उपहार, सानो किसिमको माछा र Ankh को एनालग। यो kolohort समान छ, तर आन्दोलन समावेश छैन। खराब आँखा, दुष्ट विचार, रोग र दुख विरुद्ध शक्तिशाली जन्तरको - यो एक आंकडा 8 Molvinets resembling, दुई प्रत्येक अन्य बन्द polylines संग क्रस र intertwined हुन्छन् रूपमा आफ्नो कार्यान्वयन यो amulet, स्थिर देखिन्छ।
Molvinets बोली र विश्वास को उपहार दिन्छ र खराब अफवाहहरु र कुराकानी विरुद्ध सुरक्षा। उहाँले सबै भन्दा राम्रो, वकिल, लेखक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ र विभिन्न बाँध्न को प्रबन्धकहरू अनुकूल छ हुनत मद्दत गर्छ र अन्य पेशों प्रतिनिधिको।
रूसी परम्परा मा चरा
"चरा - पृथ्वीमा सबैभन्दा निःशुल्क र खुसी प्राणीहरू" - यति हाम्रा पुर्खाहरूले, को Slavs भन्छन्। चरा एक ठाउँमा बाँधिएको छैन, तिनीहरूले संसारभरि यात्रा गर्न मौका छ। , ईश्वरीय expanse तिनीहरूलाई खुला र Transcendental। सेतो हंस - यो दन्तिये मा राम्रो चरित्र कुनै दुर्घटना हो। अक्सर दुःख मा protagonist, यो सुन्दर चरा पखेटामुनि सुरक्षा र आश्रय फेला परेन।
swans एक जोडी आफ्नो जीवन भर आपसमा विश्वासयोग्य छन् र तिनीहरूले जवान हेरचाह कसरी, छुट्टै कथा योग्य किनभने अन्डा प्वाल, दुवै spouses पालैपालो लिन। सँगै, तिनीहरू सँगै बचेराहरूलाई लागि खाना प्रदान गर्न र बन्द शत्रुहरू रोक्नु।
कुखुराको भाले - भलाइ र शान्ति ल्याउन भनेर स्लाव भाषाहरु चरा को Pantheon मा सम्मान को ठाउँ ओगटेको छ, जो अर्को चरित्र छ। चर्को कराउँदै कुखुरा दुष्ट को सेना disperses। तेस्रो crowing दुष्ट आत्मा पछि ध्वनि को audibility छोड्छ। आर्थिक र ध्यान दिएर कुखुरा सेट र घरेलू मामिलामा जिम्मेवारी मनोवृत्ति आफ्नो मालिक।
आधुनिक विज्ञान आवाज को ध्वनि को स्नायु प्रणालीमा कुखुरा कि शान्त प्रभाव र संचित तनाव राहत साबित भएको छ।
मसीही परम्परा मा राम्रो र नराम्रो को प्रतीक
प्रारम्भिक मसीही प्रतीकात्मक रूप सीधा मध्य पूर्व सम्बन्धित थियो। पुरातन राम्रो गुण, भौतिक मृत्यु पछि अनन्त जीवन को मान्छे र अरूलाई बीच समानता सक्रिय मसीहीहरूले प्रयोग गरियो, तर तिनीहरूले द्वारा आविष्कार थियो। यो कथन येशूले क्रूसमा थियो जो मा मात्र पार गर्न लागू हुँदैन। टाँग्ने एउटा सरकारी रूपमा स्वीकृत विजय को प्रतीक तिनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन जोडिएको चमत्कारी पवित्र अवशेषहरूको मात्र रानी हेलेना, यरूशलेमको रोमन सम्राट Constantine 1 326 मा सञ्चालन उत्खनन को आमा पछि दुष्ट भन्दा राम्रो को र फेला, र सँगै र साँचो क्रस।
यस पूर्व, मसीही प्रतीकहरू बिरुवाहरु, जनावर र अरूलाई सहित दुई भन्दा बढी दर्जन विभिन्न वस्तुहरु थिए। जहाज नूहको जहाज सम्बन्धित र, प्रतीक्षा रोगी हुन र उद्धार विश्वास क्षमता आवश्यकता को मसीहीहरूलाई यसरी सम्झाए थियो। एङ्कर नयाँ सिद्धान्तलाई बल र स्थिरता मा संकेत।
प्रारम्भिक मसीहीहरूको प्रतीकात्मक रूप मा, एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान चरा कब्जा। यसरी, ढुकुरले पवित्र आत्मा signifies र आशय को शुद्धता (उहाँले अहिले यो अर्थमा प्रयोग भइरहेको छ), पवित्र आत्मा नाममा बप्तिस्मा को अनुष्ठान गरेपछि नयाँ जीवनको जन्म symbolizing एक कुखुरा, मुजुरलाई पवित्र अवशेषहरूको अमरता र incorruptibility, विघटित छैन यो चरा को मासु रूपमा चित्रण गर्छ पृथ्वी र फिनिक्स - मरेका बाट पुनरुत्थानको।
amulets को आधुनिक प्रयोग
हालको सरकारी चर्च amulets मूर्तिपूजक fetishism प्रयोग ठान्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो प्राचीन वर्ण को चिन्तन र समझ, ब्रह्माण्डको symbolizing, आध्यात्मिक र दार्शनिक मनोवृत्ति गर्न मिलाउँछ किनभने, किन पनि जन्तरको एक प्रकारको छ मात्र पार, दुष्ट विभिन्न manifestations जोगाउन सक्छ बुझ्न गाह्रो छ परिवर्तन गर्न हाम्रो संकटग्रस्त संसारमा निरन्तर र सकारात्मक मुड सिर्जना गर्छ।
यो सिर्फ आजको चर्चमा रूपमा केही शंकास्पद पवित्र अवशेषहरूको द्वारा मन्दिर मा व्यापार भनिन्छ ख्रीष्टको रिस व्यापारीहरू रूपमा येशू ख्रीष्ट वा मोहम्मद मा यिन-यांग, Ouroboros, सानो किसिमको माछा वा kolohorta सुनेपछि छन् निन्दा को चिन्तन सुन छल्ले र चेन बिक्री छन् सन्देहपूर्ण छ, भाँडा र विलासिता र तथाकथित को utilitarian उद्देश्य अन्य वस्तुहरु "स्थिर दान सिफारिस गरिएको।"
amulets को नियुक्ति, दुष्ट भन्दा राम्रो को विजय symbolizing - मान्छे बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापना। यो धेरै प्रशंसनीय छ पुरातन प्रतीक अनुरूप को फेरि लोकप्रिय र लोकप्रिय मान्छे को सबै प्रकार संग, आफ्नो राष्ट्रियता र धर्म बिना हुन्छन्।
Vernadsky पुस्तकालय - युक्रेन को ज्ञान को सबै भन्दा ठूलो गोदाम
पिचू - यो ... के पिचू?
व्यवस्थापन: यो पेशा के हो? को व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित व्यवसाय
स्पन्जले सौन्दर्य ब्लेंडर ( "सौन्दर्य ब्लेंडर"): समीक्षा, प्रयोग सर्तहरू
आफ्नो हात संग चिहान मा चिहानहरू को उपलब्धि
सगरमाथा को विजय: मर्सिडीज बेन्ज Unimog